Jaamacadda Kala Duwan »Jaamacadda Hodges
Jaamacadda Hodges waxay horseed u tahay wadada kala duwanaanta tacliinta sare
Kala duwanaanta waa qaab nololeed Hodges, halkaas oo falsafadda kala-duwanaanta ay tahay mid adag. Jaamacaddeenna waxaa xoojiyay oo awood u leh bulshadeenna kala duwan, dhaqamada kala duwan ee ardayda, macallimiinta, iyo shaqaalaha keena codad badan iyo aragtiyo ku aaddan dadaalkeenna la wadaago. Waxaan ixtiraameynaa oo aan qiimeynaa qiimaha asalka ah ee shakhsiyaadka ka soo jeeda dhammaan jinsiyadaha, asalka qowmiyadeed, da ', jinsi, diimaha, jihada galmada, naafonimada, xaaladda dhaqaale ama halyeeyga, iyo fikradaha kale ee kaladuwan iyo shakhsiyaadka kaladuwan, waana qiimeynaa kala duwanaanta fikirka. Waxaa naga go'an dulqaad, dareen, faham, iyo is ixtiraam meel kasta oo ka mid ah beesheena, waxaanan xaqiijineynaa balanqaadkeena ah inaan bixinno meel lagu soo dhoweeyo hal iyo dhamaan.
Jaamacadda Hodges waxaa loo magacaabay Hogaamiyaha Kala-duwanaanta iyo Ka-mid-ahaanshaha Mac-hadka Shahaadooyinka Kala-duwanaanta.
# 3 Xarumaha Kuleejka ee ugu Amaansan Florida
Waxaa loogu magac daray Kuliyadaha Kaladuwan ee Niche ugu badan Florida
Diyaar ayaan u ahay inaan Codsado Hada!
Kala duwanaanta nolosha
Maxay Kaladuwanaantu Muhiim Ugu Tahay Kulliyadda?
Midkeen kastaaba wuxuu yimaadaa kulleejkeena ama jaamacadda aan doorto isagoo leh khibrado noo gaar ah oo qaabeeya sida aan adduunka u aragno. Markaan bilaabayno inaan la kulanno dad cusub oo ka tirsan ardaydayada kale isla markaana aan koorsooyin la qaadanno, waxaan bilaabeynaa inaan aragno in waaya-aragnimadeennu ay intaas uun yihiin - waaya-aragnimadeenna.
Maskax furan, waxaan ku baranaynaa sida waaya-aragnimada dadka kale ay gebi ahaanba aragtiyo cusub ugu keenaan aragtideena iyo sida aan adduunka u aragno. Furitaanka maskaxdeena si aan u fahamno isugeynta, jinsiyada, isirka iyo kala duwanaanshaha jinsiga, xaalada halyeeyga, kala duwanaanshaha diinta, da'da, iyo xaalada dhaqaale waxay naga dhigeysaa shaqsiyaad sifiican uxiran. Markaad shaqaalaha ugu baxdo aragtidan cusub, waxaad sare u qaadi doontaa tartanka dhaqaale ee Mareykanka.
Jaamacadda Hodges waxay diiradda saareysaa dhisidda buundooyinka bulshada weyn iyo la shaqeynta kooxaha si ay u keento diiradda ballaadhan oo aad loo muujiyey oo ku saabsan khibradaha kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada heer sare iyadoo loo marayo kaqeybgalka bulshada. Isagoo kahadlaya diiradan, Hodges wuxuu siiyaa jadwalka waxqabadyada kaladuwan ee ardayda kulleejka iyo xubnaha bulshada si isku mid ah. Gaadho si aad u fahamto waxa inaga dhigaya mid kasta oo ka duwan oo gaar ah, arag dhaqamo badan oo ficil ah, waxaadna u kori doontaa shaqsi si furan u aqbala kala duwanaanshaha dadka kale. Aragtidan cusub waxay kuu oggolaaneysaa inaad xoojiso fahamka dadka kale ee goobta shaqada.
Sidee Hodges U U Aqbashay Kaladuwanaanta?
Hodges U waxay kuqanacsan tahay kala duwanaanshaha siyaabo badan.
Sidee? Adoo wax ka qabanaya caqabadaha la yimaada isbeddelada tirakoobka dadka, aragtiyada kala duwan, iyo caddaaladda goobta shaqada. Hodges wuxuu wax ka qabtaa caqabadahaas iyadoo diiradda la saarayo ka mid noqoshada, kartida dhaqanka, iyo sinnaanta. Sidan oo kale, Jaamacaddu waxay ka shaqeysaa sidii ay u abuuri lahayd dhaqan hodan ah oo waxtar leh iyada oo loo marayo jirkeena ardaydeena kaladuwan. Kala duwanaantaani waxay ka caawisaa ardayda inay dareemaan awood waxayna u keeni karaan naftooda oo dhan inay wax bartaan oo koraan.
Maxay Tahay Inaad Aqbasho Kaladuwanaanta?
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka shaqeyso door kormeer, ama xitaa koox, waxaa muhiim kuu ah adiga inaad aqbasho bey'ad kaladuwan si aad ugu guuleysato. Hodges wuxuu bartay in kormeerayaasha maanta ay tahay inay lahaadaan xirfado dhaqamo kala duwan iyo jiilba, isla xirfadahaas oo kale ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad xubin wax soo saar ka noqota koox. Waxaa sidoo kale lagaa rabaa inaad lahaato masuuliyada wax soo saarka ugu badan iyo ka mid noqoshada dhamaan inta badan meelaha shaqada.
Baahida aad u qabtid inaad ka shaqeysid kooxaha dhaqamada kala duwan iyo jiilasha isku dhafka ah ayaa ah xoogga dhaqaajiya Hodges ee u heellan abuurista jawi kala duwan. Wax kasta oo aan sameyno waxaa udub dhexaad u ah abuurista jawi ardaydeena ay ku guuleystaan, iyo xulashadeena ah in aan siino jawi waxbarasho oo ka duwan waxay caddeyn u tahay sida aan uga go'antahay wadadaada guusha.
Tirakoobka Kaladuwan ee Hodges
Jaamacadda Hodges waxay soo dhaweyneysaa ardayda ka soo jeeda dhammaan jinsiyadaha, asalka, da'da, jinsiga, diimaha, jihada galmada, naafonimada, xaaladda dhaqaale ama halyeeyga, iyo aragtiyo kale oo kala duwan iyo kala duwanaanshaha shaqsiga. Waxaan ku dhiiri galineynaa arday walba inuu hadlo oo baro dadka kale khibradahooda kala duwan si loo abuuro jawi waxbarasho oo aqoon dheeri ah loo wada leeyahay.
Waxaa naga go'an inaan u abuurno xarun kaladuwan dhammaan ardayda si ay u helaan guul. Hoos waxaa ku yaal tirakoobka Jaamacadda Hodges.
Isdiiwaangalinta Jinsiyada iyo Jinsiyadaha
Afrikaan Mareykan ah: 12%
Caddaan, Isbaanish ahayn: 38%
Mid kale, isku dhafan, ama aan la aqoon: 6%
Guud ahaan ardayda laga tirada badan yahay iyo qowmiyadaha kaladuwan ee jaamacadda Hodges waa 62%. Kala soocani wuxuu naga dhigayaa mid ka mid ah ururada tacliinta sare ee kaladuwan ee Florida. Waxaa sidoo kale naloo magacaabay hay'ad sare oo u adeegta Hispanic. Ku noqoshada jaamacadda ugu kala duwan ee Florida waa caqabad aan soo dhaweyneyno, markaan raadineyno inaan ardayda siino waxbarasho kala duwan - waxaan dooneynaa inaan u abuurno adduun ka wanaagsan dhammaanteen.
Kala xiriir Hodges U About Kaladuwanaanta
Waxaan soo dhaweyneynaa weydiimahaaga ku saabsan Kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada xerada iyo bulshada dhexdeeda. Fadlan nala soo xiriir:
Xafiiska Kala-duwanaanta, Ka mid ahaanshaha iyo Aqoonta Dhaqanka
4501 Boulevard Colonial, Dhismaha H